कम्प्युटर जनशक्ति लाई पाखा लगाउदै सरकार , आन्दोलित हुँदै विद्यार्थी । : Sajha Network - Nepal's No. 1 Online News Portal
कम्प्युटर जनशक्ति लाई पाखा लगाउदै सरकार , आन्दोलित हुँदै विद्यार्थी ।
हिम शिखर , माघ २६ काठमाडौं ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक बनाएको सरकारले पदपुर्तिमा कम्प्युटर अपरेटर र सहायक अप्रेटर लाई नसमेटेको समाचार बाहिरिए पछि विभिन्न ठाउँमा अध्ययन गर्दै गरेका र वर्षौं देखि लोकसेवा तयारी गर्दै आएका कम्प्युटर जनशक्ति मा हलचल मचिएको छ । आफ्नो भविस्य माथी सरकारले कुठाराघात गरेको भनेर आक्रोशित बनेका छ्न । अब केही दिन भित्र देशभरिका क्ष्त् हरु लाई सडक उतार्ने योजना बन्दै छ काठमाडौ मा ।
नेतृत्वमा पुगेकाहरु को अपरिपक्क कार्यनीति र एकाध कर्मचारीहरु को निहित स्वार्थपुर्ती गर्न को लागि सरकार ले बहुसंख्यक प्राविधिक जनशक्ति लाई पाखा लगाउने निर्णय गर्दैछ । जसले गर्दा युवायुवतीहरु मा त्रास संगै आक्रोश सृजना भएको छ । सरकार ले एकतर्फ प्रत्येक कार्यलय , विद्यालय वा शिक्षण संस्थान लाई प्रविधियुत्त बनाउदै सेवाग्राही लाई छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्ने विद्यार्थीहरु लाई तल्लो कक्षा देखी नै कम्प्युटर ज्ञान प्रदानगर्ने भन्दै कम्प्युटर खरिद गरेर थन्काएको पनि छ ।अर्को तर्फ वर्षौं देखि बेरोजगार उत्पादित कम्प्युटर जनशक्ति लाई लोकसेवा को माध्यम बाट फुलफिल नगर्ने निणय गर्न गइरहेको छ ।
विगत केहि वर्षदेखि विद्यालयमा कक्षा ६ देखिनै कम्प्युटर विषय अनिवार्य विषय कै रूपमा पढाउदै आएका छ्न तर स्वयं शिक्षकहरु लाई समेत कम्प्युटर ज्ञान छैन । केबल चित्र हेरेर वा लेखेकै भरमा अन्य विषय जस्तै झारा टार्ने काम भएको छ । प्रत्येक माध्यमिक स्तरका विद्यालय मा कम्प्युटर ल्याव राखिएको छ तर पढाउने जनशक्ति छैन । कमिसन खान कै लागि भएपनी विना योजना कम्प्युटर खरिद गरियो , अहिले कम्प्युटर ले धुलो खाएर बसेका छ्न ।
प्रदेश र स्थानीयतह का प्रत्येक कार्यलयमा कम्प्युटर छ्न तर त्यसको प्रयोग गर्न जान्ने कोहि छैनन् । ती कम्प्युटर अहिलेसम्म एकाध कार्यलय बाहेर सबैमा जन प्रतिनिधि र कर्मचारी को सेल्फी खिच्न मात्र प्रयोग भएको पाइन्छ ।
नेताहरु आफ्नो भिजन मा त कहाँ सक्थे , एउटा आइटी लाइ बोलाएर Policy बनाउन त लगाउछ्न । अनि Policy हेर्नेहो भने नासा मै बनाए जस्तो पनि देखिन्छ तर ती कागज मै सिमित छ्न ।
भन्न त पाँच वर्षमा नेपाल को सूचना प्रविधि को क्षेत्र लाई विश्व मानचित्र मा उभ्याउने भन्छ तर आइ टि जनशक्ति लाई व्यावस्थपन नगरी कसरी सम्भव होला रु दुनियाँ ले डिजिटल दुनियाँ लाई भरपुर प्रयोग गर्दै विकास को फड्को मार्दै गर्दा हाम्रो मा भएका जनशक्ति लाई व्यवस्थापन गर्नु को साटो विस्थापित गर्न लागिदै छ ।
E governance , E- commerce ,E- Heath , E- education आइटी जनशक्ति बिना कसरी सम्भव छ ? एउटा कार्यलय लाई स्मुथ तरिकाले संचालन गर्न कम्प्युटर अप्रेटरविना कसरी सम्भव छ ? के निजामती कर्मचारी भर्ना गर्दा तोकिएको कम्प्युटर मापदण्ड ले कार्यलयधान्न सम्भव छ ? के गरिब तथा मध्यम स्तरका बेरोजगार जनशक्ति को आशा र सपना को ढोका बन्द गर्नु न्योचित होला ? के सरकार ले मलेशिया र जापान सँग श्रम सम्झौता गरेर दक्ष जनशक्ति खेद्न थालेको हो ? आइ टि जनशक्ति लाई व्यावस्थापन गर्न सकिदैन भने आइ टि ईन्स्टिच्युट किन खोली राख्ने ? यी यावत् प्रश्न को जबाफ खोज्न सम्पुर्ण देशभरी का कम्प्युटर जन शक्ति सिंहदरबार आउने योजना बनाउदै छ्न । सरकारले समयमै विचार पुराओस ।